Etu esi eji Hashtags mee ka mkpọsa mkpọsa gị bawanye Martech Zone
39% nke ulo oru emela soro mgbasa ozi mmekọrịta ha na ọ na-eduga ohere efu. Aga m egosi gị otu esi esochi hashtags nke ọma n'oge ihe omume, yana usoro ị nwere ike iji wuo mgbasa ozi na-eru. Aga m elekwasị anya n'ihe abụọ:
Ihe dị mkpa metrics ịkwesịrị ịdị njikere ịlele mgbe ị na-agba ọsọ hashtag
Simple aghụghọ i nwere ike iji n'ịwa a wider-apụghị iru
Metrics Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Dị Mkpa
Ezubere ọtụtụ mkpọsa mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji wulite mmata kama ịchụgharị mgbanwe ozugbo. N'iburu nke a n'uche, ị ga-edo anya nke ọma ebumnuche nke mkpọsa gị yana usoro metrici ịchọrọ iji soro iji wee maa ikpe.
iji Igodo nke akaụntụ trackers, ị ga-enwe ike soro usoro ntọala nke usoro ndị a tupu na mgbe ị gachara mkpọsa hashtag gị.
Ito ndị na-eso ụzọ na nkezi ọnụego aka enyere gị aka ịlele mmetụta na-adịgide adịgide nke mkpọsa hashtag gị nwere maka ndị otu obodo dị ugbu a na ndị ọhụụ.
Gini mere ibu onye na - eso uzo bu ihe eji eme ihe?
Uto ndị na-eso ụzọ bụ akara maka iru mkpọsa ị họọrọ ịgba ọsọ. Ọ na-egosi na mkpọsa gị nwere ike iru ndị ọrụ na-ejikọtabeghị na akara gị.
Iji tụọ mmetụta nke mkpọsa gị, na-abanye nkezi nke uto n'izu ole na ole tupu ihe omume ahụ. Mgbe ahụ, banye na-eto eto kwa ụbọchị mgbe ihe omume gasịrị.
[igbe ụdị = ”ihe ịga nke ọma” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”80%”] Ihe ịga nke ọma na-akwalite omume kwesịrị igosi ihe elu trending na-eso ụzọ ibu ọnụego n’oge ndị a. [/ igbe]
Ka ọ dị ugbu a, ọnụọgụ ọnụọgụ na-egosi ịdị irè nke ozi gị. Ọ bụrụ na ozi gị na ndị Fans gị na-akpali dị egwu, ị ga-ahụ mmụba gburugburu ọnụego ntinye aka na akaụntụ gị.
Usoro a bụ ihe na-egosi na ị wulite ezubere iche na-esote mgbasa ozi hashtag.
Kedụ ka ị ga - esi soro onye na - eso ụzọ ya?
Nwere ike iji aka nyochaa ọnụọgụ site na idobe mpempe akwụkwọ ị na-emelite kwa izu. Ikwesiri ịbanye mgbanwe ndị na-eso ụzọ, yana ntinye aka kwa izu tupu mmemme ahụ. Ebe ọ bụ na ị nwere ike ịdebe otu akaụntụ maka nke ọ bụla n'ime Twitter nchịkọta dashboard, usoro a nwere ike iri oge.
Ọ ga - ahapụ gị n'ọchịchịrị ma ọ bụrụ na ị nwere ndị nnọchi anya ika na - enyere gị aka ịkwalite mkpọsa ahụ - ị ga - agagharị na ntanetị Twitter ọ bụla iji chịkọta usoro ntinye aka mgbe ha na - agbanye ozi gị.
[igbe ụdị = ”Ama” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”80%”] can nwere ike machiini usoro site na iji a nchịkọta mmadụ mgbasa ozi ngwá ọrụ dị ka Igodo. [/ igbe]
Iji Keyhole, ị nwere ike soro ọtụtụ akụkọ n'otu ebe. Ikpo okwu na-eso eto onye na-eso ụzọ tupu na mgbe mkpọsa gị, na-enyocha ịdị irè nke ndị nnọchi anya gị.
Ọ dị mkpa ịgbaso usoro akaụntụ akaụntụ gị tupu mkpọsa na mgbasa ozi mgbasa ozi iji mụta ihe na-arụ ọrụ, ihe na-adịghị arụ ọrụ na ịchọta ozi nke na-emetụta ndị ọhụrụ hụrụ gị.
Kedu usoro metrik ị kwesịrị ịgbaso ozugbo iji chọpụta mmetụta nke mkpọsa hashtag gị?
Thetụle ịdị irè nke mkpọsa hashtag agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na enweghị ngwaọrụ mgbasa ozi dịka Keyhole. Nwa amaala Twitter nchịkọta mmemme a na - enyere gị aka ịdebe ọdịnaya nke imepụta onwe gị mana ọ gaghị enye gị ohere ị ga - esi nweta hashtags ma ọ bụ isiokwu ị na - akwalite na - agbasa n'ofe ikpo okwu.
Usoro iji lekwasị anya n’oge mkpọsa gị:
iru - ọnụ ọgụgụ nke ndị pụrụ iche nwere ike ịhụ ọkwa gị.
Mmetụta - ọnụ ọgụgụ nke echiche ndị nwere ike (gụnyere otu ndị ọrụ na-ahụ otu post ọtụtụ oge)
Ihe ngosi - na - atụle mkpokọta Ngosipụta nke onye ọrụ mepụtara, gụnyere echiche nke ndị Retweeters mepụtara
Ntinye aka Influencer - na-atụle njikọ aka emere site na nke ndị mmadụ na-etinye na hashtag ma ọ bụ isiokwu gị. Nke a bụ ọnụọgụ na-enye gị ohere iji bulie mkpọsa gị ma bulie akara ngosi gị, site na ịbịakwute ndị na-eme ihe ike na ọnụọgụ dị elu, ị ga-enwe ike iru ndị na-ege ntị na ahịa gị.
Nke a bụ nhụchalụ nke nchịkọta Keyhole na Nchọpụta Mmetụta:
[igbe ụdị = ”ịdọ aka ná ntị” mmezi = ”” klas = ”aligncenter” obosara = ”80%”] Ebe ọ bụ na Twitter adịghị enye kpọmkwem akaụntụ metrics ka atọ Party ngwá ọrụ, iru na Mmetụta gbakọọ dabeere na ọnụ ọgụgụ nke usoro iheomume nke ihe ahu gosiri. A na-akpọ nọmba a ka ọ nwere ike ịmasị. Mmetụta dị adị nwere ike ịbụ site na 3% - 13% nke mmetụta ndị nwere ike ịdabere na ihe ndị dịka oge nke post, isiokwu, na ọrụ ndị na-eso ụzọ. [/ Igbe]
Atụmatụ dị mfe iji mepụta Mgbasa Ozi Mgbasa
Tupu ịmalite mkpọsa gị, jiri hashtag na isiokwu tracker soro usoro isiokwu ụlọ ọrụ sara mbara metụtara ihe omume gị. Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, ị ga-amalite ịhụ ndekọ akụkọ na-enweta ọtụtụ aka na ụlọ ọrụ gị.
Gakwuru ndị a ma kpọọ ha ka ha sonye na mkpọsa gị mgbe ọ malitere.
Jiri akaụntụ ahụ ngwá ọrụ iji soro akaụntụ gị na nke ndị asọmpi. Nke a ga - enyere gị aka ịchọta ọdịnaya kacha mma na oge izipu gị. Kwalite izipu ozi gị na ọdịnaya na ahịrịokwu nke na-eme nke ọma n'etiti ndị na-ege gị ntị. Tinye ihe nhicha nke mezuru nke ọma na mkpọsa gị.
[igbe ụdị = ”Ama” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”80%”]Pro NDỤMỌDỤ: mgbe ị na-ewe ndị ọrụ ọhụụ, chọọ ndị natara 10 ma ọ bụ karịa njikọta na post ọ bụla dị mkpa. [/ igbe]
Ngosipụta: Anyị nwere ntinye aka na Igodo.
Tags: njikọ akaikpugheọrụ ndị na-eso ụzọhashtagnyocha hashtaghashtag mkpọsaikpughe hashtaghashtag mmetụtahashtag iruMmetụtaọnụego ntinye akaigodoiruelekọta mmadụ mgbasa oziihe ntinye mmaduelekọta mmadụ na-esontinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụelekọta mmadụ na-esonụelekọta mmadụ mgbasa ozi irummekọrịta mmadụ na ibe yaTwitter
Jesse bu IgodoỌganihu na ire ahịa. Ọ na-ewuli akara Keyhole site na imepụta mmekọrịta siri ike na ndị ahịa ndị ọzọ na-elekọta mmadụ ma nwee mmasị ikwu banyere ahịa.
SMS: Otu esi ewelite ma bulie ozi ederede gi